Best Tools Majarafad Snow for sale - Shiinaha Richina
Qaabeeyaan No .: H350
Tani Best Snow Majarafad ayaa Large , oversized D-xajin qabtaa ogolaan waayo, mid ama laba daranyihiin shoveling xitaa marka uu xidhan yahay gloves.The Best Snow Majarafad ayaa ah usheeda dhexe steel xoog caawinaysa dhifashada iyo dhaqaaqin xamuulka buuxa. Waxaa la leexiyo doono, jebin ama xaqiro, bixinta sano dhibaato qaab xor ah. The Snow Shvoel Best ku laayeen steel optional leeyihiin strip Duugga bir ah in fidiyaa nolosha daab. Kuraasta qarkiisa adag galay channel la doorsoon on jirridda in ay iska caabin laabaya. The Snow Majarafad Best waa qalab muhiim u ah jiilaalka.
Qalabka Majarafad Snow Best, Snow maandooriyayaasha Majarafad,
1300mm Guud Length
PP daab, size367 * 445mm
budo 30.5mm Dia tube steel dahaarka xamili la darafta caag ah oo jilicsan
Large, raaxo D-qaab xajin
Daab iyo gacanka ku xiran by qufulka SNAP
Colors laga beddeli karaa
Raadinta fiican Snow Majarafad Lowes saaraha & qeybiyaha? Waxaan leenahay xulashada ballaaran ee qiimaha weyn inuu kaa caawiyo inaad hesho hal abuur leh. All ee Snow Majarafad Home Depot yihiin tayada damaanad qaaday. Waxaan nahay Shiinaha Asal Factory ee Reviews Snow Majarafad. Haddii aad qabto wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Ergonomic Snow qaadada Majarafad
Ergonomic Snow Majarafad maandooriyayaasha leh D qaab xajin
Telescopic Car Snow Majarafad la caaga Blades
Aluminum Midho iyo Snow qaadada Majarafad